Gacan-gashiyaasha qaboojiyaha clothing Dharka bakhaarka qabow • Shaashadda kumbuyuutarka ee P&M
Gacan-gashiyaasha qaboojiyaha waa qayb aad muhiim ugu ah qalabka qaboojiyaha iyo bakhaarada qabow. Gacmuhu badanaa waxay la kulmaan taabashada tooska ah ee alaabada iyo qalabka. Badanaa waxay ku dhacaan qabow sababo la xiriira dusha sare iyo ficilka heerkulka hoose, dabaysha oo badanaa ku dhacda qoyaan badan. Qabowgu badanaa wuxuu ku bilaabmaa casaan maqaarka, maxaa yeelay wareegga dhiigga ayaa la dedejiyaa si loo kululeeyo qaybaha la qaboojiyey. Calaamadaha soo socdaa waa xanuun, cuncun, iyo dareemidda gacmo barar. Heerka qabowgu wuxuu kuxiranyahay waqtiga iyo xaaladaha,
taas oo maqaarku u soo gaadhay waxyeelada xun ee heer kulka. Gacan-gashiyada ayaa ah kahortagga heerkulka hooseeya, waxayna kuu oggolaaneysaa inaad si xor ah u gudato waajibaadkaaga. Galoofyada qaboojiyaha alaab tayo sare leh ayaa kuu oggolaaneysa inaad ka ilaaliso gacmahaaga dhaxanta, waana sababtaas sababta dukaankeennu u bixiyo kaliya alaab tayo sare leh oo laga helo soo-saareyaasha lagu taliyay.
POLAR RANGE COLDSTORE wuxuu jecel yahay galoofyada barafowga iyo qaboojinta
Gacan-gashiyada loogu talagalay qaboojinta iyo qaboojinta TG2 XTREME COLDSTORE GLOVES
Xullo ballaaran oo gacmo gashi ah ayaa macaamiisha ka dhigaya kuwo doonaya inay iibsadaan alaabada kaliya galoofisyada, laakiin sidoo kale dhammaan noocyada kala duwan ee dharka qaboojiyaha iyo dukaamada qabow, iyagoo ka dooranaya surwaal, jaakadaha ama kabaha. Gacan-gashiga kuleylka darawallada dhogorta dhogorta dharka waa shey buuxiyey heerarka EN388. Gacan-gashiyada oranjiga ah ee TG1 Pro Coldstore waa shey leh dahaadh khafiif ah. Nooca gacmo gashiyada loo yaqaan 'Arctic Gold Coldstore gloves' ama 'Eisbaer Freezer gloves' oo buuxiya shuruudaha EN 511 / EN 388 - kuwani waa alaabooyin laga soo xulay dalabkeena. Dhammaan noocyada galoofyada ayaa lagu sharaxay si faahfaahsan si xulashada looga dhigo mid fudud sida ugu macquulsan.
Darawallada Fleece galoofisyada kuleylka ah
Qiimaha soo jiidashada leh iyo tayo sare leh
Shirkadeena waxay keentaa dhirta wax lagu farsameeyo, bakhaarada, dukaamada qabow, shirkadaha saadka, tanina waxay dhalisaa amarro waaweyn alaabta. Tan awgeed, waxaan awoodnay inaan shaqeyno qiimo dhimis soo saareyaashayada, taasoo keentay qiimo tartan macaamiisha ah. Intaa waxaa sii dheer tayo sare leh alaabtu waxay ka dhigeysaa macaamiil badan oo ku qanacsan inay dib noogu soo noqdaan, tanina waxay noo ogolaaneysaa inaan ku ilaalino qiimaha iibsiga qandaraasleyaashayada heer hoose.
Inta badan dharka iyo dharka, waxaan ku calaamadeyn karnaa shaashad kasta, waxaan sameynnaa astaan ​​iyadoo la adeegsanayo habka daabacaadda kumbuyuutarka lub daabacaadda shaashadda. Waxaan leenahay baarkinka mashiinka noo gaar ah, kaas oo noo ogolaanaya inaan raacno nidaamka calaamadeynta marxalad walba.
Gacan-gashiyada qaboojiyaha iyo qolalka qabow TG1 PRO COLDSTORE
baaquli loogu talagalay dukaamada qaboojiyaha iyo qaboojiyahadharka ilaalintagaloofyada qaboojiyahaGacmo gashi Coldstoregaloofyada heerkulka hooseeyaGacan-gashi gacmeed barafoobayGaloofisyada barafeeyahaGaloofyada dhogortaGacmo gashi gacmo gashigaloofyada kuleylka ah